Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay oo Soomaaliya ugu hambalyeeyay dhaarinta baarlamaanka cusub - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaXoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay oo Soomaaliya ugu hambalyeeyay dhaarinta baarlamaanka cusub
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki-moon. [Sawirka: Archive]
New York-(Puntland Mirror) Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki-moon ayaa soo dhaweeyay dhaarinta baarlamaanka cusub ee Soomaaliya oo la dhaariyay 27-dii bishaan December, waxaana uu si dhiiran ugu hambalyeeyay shacabka Soomaaliyeed munaasabadaas dhaarinta baarlamaanka, sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay xafiiskiisa maanta oo Khamiis ah.
“Dhaarintan lagu guulaystay ee baarlamaanka waxay sumadinaysaa horumar dheeri ah oo laga gaaray xasiloonida siyaasadeed iyo ammaanka Soomaaliya,” ayuu Xoghayaha Guud ku yirii bayaanka.
Ban Ki-moon ayaa ka codsaday baarlamaanka cusub in ay hadda horey u wadaan hanaanka doorashada ee lagu dooranayo labada afhayeen ee aqalka hoose iyo kan sare iyo madaxweynaha dalka.
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ayaa sidoo kale u jeediyay haayadaha dowliga ah in ay soo dhammeystiraan xubnaha xildhibaanada ee dhiman.
Talaadadii lasoo dhaafay ayaa magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya lagu dhaariyay ku dhawaad 283 xubnood oo isugu jirey labada aqal.